Shirka Madaxda uga socday xerada Afisiyooni oo la soo geba-gabeeyay - Awdinle Online
Shirka Madaxda uga socday xerada Afisiyooni oo la soo geba-gabeeyay
Waxaa Galabta la soo gebegeboobay wajiga 1aad ee Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran oo illaa saaka Subaxnimo hore ka socday Xarunta Ciidanka Cirka ee Afisyooni.
Shirka oo uu furay, guddoomiyeyna Madaxweynaha muddo xileekiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ka qayb-galeen dhammaan Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir waxa lagaga wada hadlay dardar gelinta iyo hirgelinta doorashooyinka qaranka oo ay aasaas u yihiin heshiisyadii 17kii September iyo 16kii Febraayo.
Shirka oo maanta si weyn looga dooday ajandayaasha shirarka dambe ee Golaha Wadatashiga iyo dardar gelinka doorashooyinka ayaa sii socon doona, waxaana lagu balamay in la isugu soo laabto Maalinta Berito ah.
Shirka Maanta Madaxda dowladda iyo dowlad Goboleedyada uga furmay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo qaban qaabisay Beesha Caalamka, iyada oo ku cadaadisay inay Madaxda kulmaan ka hor Shirka wadatashiga ee dhawaan furmaya.
Previous articleDagaal culus oo dhex-maray Ciidamada Puntland & Daacish